> Resource > Video > Sida loo beddel Volume in Media Files
Ma doonaysaa barnaamij ka bedeli kartaa mugga audio si uusan u noqon doonaa mid aad u weyn yahay mid aad u xasilloon ama? In kastoo ciyaartoy badan warbaahinta ama ku hadla hayaan mugga inta lagu guda jiro loo maqli karo, waxaa weli noqon kartaa dhibaato looga xumaado oo ay qaadanayso waqti u dhigay. Oo qaar files soo bixi yihiin halkii hooseeyo si ay u dhagaystaan ​​xitaa aad kor u mugga heerka ugu sareeya ee computer. Sidaas awgeed waxa lagu talinayaa in ay caadi mugga si joogto ah.
Thanks to Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , qalab video tafatirka xirfadeed oo sidaas awgeed ay la yaabka lahaa fududahay in la kordhiyo / yaraadaan heerka maqalka codka xirfad leh. Hoos waxaan ku tilmaami doonaa sida taas loo sameeyo in qasabno yar.
Fiiro gaar ah : Barnaamijkan waxaa laga heli karaa labada Windows iyo Mac madal. Hoos hage waxaan qaadan doonaa Screenshot Windows. Dadka isticmaala oo doonaya in ay qabsadaan mugga audio on Mac, kaliya raac tallaabooyinka la mid ah iyadoo la isticmaalayo Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) .
Ka dib markii ay soo bixi oo lagu rakibay this kordhaya software mugga, si fudud u jiidi oo hoos u audio & video files si uu furmo suuqa hoose. Haddii kale, waxaad riixi kartaa "Import" xitaa folder file aad iyo iyaga oo dhan ku shuban. Ka dib markii in, jiidi oo iyaga iska Timeline Video ah.
Ogow in ku dhowaad dhammaan video & qaabab audio taageeray, oo ay ku jiraan wmv, MOV, AVI, MKV, MP4, Mpg, MPEG, mod, DV, MTS, AVCHD, M2TS, TS, MP3, AAC, MKA, iyo wixii la mid ah.
2 beddel mugga audio fudayd
Marka file video waa meel, double u riix si aad u muujin guddi tafatir ah. Guddiga waxay ka kooban video iyo tafatirka audio labadaba. Si aad xaalkaa file maqal ah oo kaliya, riix khaanadda Audio hoos si ay u helaan suuqa kala tafatirka audio. In submenu mugga codka gacanta, guuraan slidebar Volume bidix ama midig si loo kordhiyo ama wax ka hooseeya hoos mugga. Marka aad qabsato, Waxaad dhegaysan kartaa saameyn-waqtiga dhabta ah audio ah adigoo gujinaya icon play ah.
Sida ku cad suuqa kala image ka, waxa kale oo aad sameyn kartaa in libdhi / libdhi soo baxay, hufay wax soo picth, iwm
3 Save audio is beddelay (video) faylka
Marka aad ku qanacsanayn natiijada, si fudud ku dhacay "Abuur" si uu u badbaadiyo audio is beddelay (video) file. Daaqadda ouput qaab oo muujinaysa, doorato qaab doonayay in uu u badbaadin on folder cayimay on your computer.
Ka sokow video dhoofinta your computer, aad dhoofin karto in presets aallada sida iPhone 5, iPad mini, iPod Touch, Madaxweyne Siilaanyo 360, PS3 aad, si toos ah video geliyaan si ay u YouTube, ama u gubato si DVD.
Talooyin Bonus: Ka sokow qabsado mugga audio, aad wax dheeraad ah ka qaban kartaa arrintan wejiyo software editor video:
Picture-in-sawir : saar badan videos ee isku nooc u sheegto threads seveal ka mid ah sheekada.
Qaboojiyaha jir ah : Focus on wajiga dadkii badnaa, oo wuxuu qotomiyey zoom gudaha iyo dibedda si ay u sameeyaan mooshin xiise leh!
Ogaado goobta Auto : doondoon, oo kala qaybsan tahay isbedel goobta si fudud u heli darbooyinka midig.
Iyo in ka badan ....